အိမ် | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Home & Garden » အိမ်	15
mama noyar has written 25 post in this blog.
View all posts by mamanoyar →	Blog
ရန်ကုန်သား says: mamanoyar ရေ…
ho leo says: အဓိက ကတော့ home sweet home ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်
P chogyi says: အမေ့အိမ် ဆိုရင် ပိုပြီး ခံစားရမယ်
mamanoyar says: အခုလို အကြံပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
မမ အညာသူ says: မမနိုရာရဲ့စာကိုဖတ်ရမှ
မဂွတ် ထော် says: အဟမ်း…အဟမ်း
မွန်မွန် says: ဟုတ်ပါတယ် နိုရာရေ…
etone says:ွှအိမ်ဆိုတဲ့ အရိပ်နဲ့ ကင်းကွာတဲ့ အချိန်လေး ခဏတော့ ရှိခဲ့ဖူးတယ် ။ တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ် တစ်ခါမှ မဖြစ်ဘူးတဲ့ တမ်းတစိတ်မျိုးလည်း ရှိခဲ့ဖူးတယ် ။ အိမ်မှာနေစဉ်မသိရဘူး အဝေးရောက်မှ သိရတာမျိုးလေ ။
မိသားစုကံကောင်းလား .. ဆိုးလား လည်း ကြိုမသိတော့ … အိမ်ချင်းတူပေမယ့် … သာယာနိုင်မလား ၊ မသာယာဘူးလားဆိုတာ ကြိုတွေးရခက်တယ်လေ … ။ ကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ရမယ့် မိသားစုနဲ့ အိမ်လေးဆိုလျှင်တော့ …. ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ပုံဖော်ထုဆစ်ခွင့်ရလို့ .. နွေးထွေးတဲ့ အိမ်လေးဖြစ်မယ် ထင်မိတာပါပဲ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 481
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: ဟိုအရင် အချိန်တွေ…
manawphyulay says: အိမ်………… အမေ့ရဲ့ နွေးထွေးမှုတွေ ပေးစွမ်းနိုင်နေတဲ့နေရာ
mamanoyar says: နိုရာ့ ပိုစ့်လေးကို ဖတ်ပြီး comment
maung khinmin says: အိမ်ဆိုတာ…လုံခြုံမှုထက် နွေးထွေးမှုကိုမျှဝေတဲ့နေရာပါ
မိုး မင်းသား says: ကျွန်ုပ်အားငယ်တဲ့ အခါနွေးထွေးမှုနဲ့ အားပေးတဲ့ နေရာ….တဲ့ လား…
မောင်ပေ says: နိုရာ့ ရဲ့ ပို့ စ်ကို ဖတ်အပြီးမှာ
mamanoyar says: ကိုခိုင်မင်း၊ ကိုမိုးမင်းသား နဲ့ ဦးပေ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
Comments By Postမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - အလင်း ဆက် - nozomiနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၅) - သူကလေး - သူကလေး``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - uncle gyi - ko pauk mandalaySakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ - uncle gyi - မောင် ပေရွာသူ/သားများ အတွက် - မဟာရာဇာ အံစာတုံး -etoneအတု - uncle gyi - naywoon ni“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ko pauk mandalayဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - uncle gyiအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - lele kyi - kaiစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - uncle gyi - Miss Crystalline“သဘာဝအလွမ်းမင်းသားကြီး (ဦးကြင်ဥ)” ရှေးကဗျာများပြန်လည်ကူးယူဖ်ာထုတ်ခြင်း အမှတ် (၈) - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ko pauk mandalay``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - cobra - ခင် ခသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - အလင်း ဆက် - TNAရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - garuda - weiweiဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - Mr. MarGa -etoneလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - မောင် ပေ - Ma Maမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ -etone - may julyဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့..... - ခင် ခ - kyeemiteEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities